Nyocha Akwukwo - Nyocha akwukwo uche nke di n'igwe
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Nnyocha Nyocha
Nyocha zuru oke
Naebe nrụọrụ weebụ na - eme ka 1000 si "psychics" kwadoro ihe na - adọrọ mmasị banyere nke a abụghị onye ọ bụla na - akwado. Enwere n'ezie igwe na ụlọ ọrụ ekwentị AT & T. Onye ọ bụla nke na-akpọ onwe ya onye nwere uche nwere ike ịbanye na-amalite na-emefu ego n'aka ndị ahịa na-enweghị atụ. Enweghị usoro nyocha ma ọ bụ nkwenye. Ndị ọkachamara gbasara ego na-akwụ ụgwọ ego Keen.com ka ha nwee ike ịmepụta ha na saịtị ha, ma nyekwa ha nọmba ekwentị. Ọkụ dị mma ma n'oge na-adịbeghị anya, ndekọ ha jupụtara n'ụyọkọ ndị ọkachamara ọhụrụ, ndị nwere ahụike na-ahụmahụ ugbu a. Enweghị m ike ịkwado ọnwu ọzọ. Ọtụtụ ndị ha na-akpọ psychics na-apụ m. Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ndụmọdụ, ana m akwado ị zere Keen. Atụla anya inweta ego gị ma ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ ọjọọ .. Ma enweghi m ike.
Na.com malitere na 10 afọ gara aga site na ezigbo ahụike. N'oge na-adịbeghị anya, onye nwe ụlọ rere ụlọ ọrụ ahụ na AT & T, ụlọ ọrụ ekwentị, ma ha esiwo na mgbe ahụ, ruo n'ókè ugbu a na ha abaghị uru n'echiche m. Ihe nzaghachi ha dị mma mana echere m na ọ dị mfe iji aka.
Usoro nyocha maka nyocha
Na nwere ihe ọ bụla ọ bụla usoro nyocha maka psychics. Ha nwere ihe ụfọdụ a chọrọ mgbe psychics debanyere ma ọ dịghị ihe na-egosipụta eziokwu nke psychics. Ihe mere Keen nwere ọgụgụ isi karịa online karịa ọrụ ọ bụla ọzọ bụ n'ihi na ha ga-ahapụ ka mma onye ọ bụla nyere agụ.
Na emeela ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị ọhụrụ na-eme ka ọ bụrụ enyi. Enwere m mmasị na ọhụụ ọhụrụ ahụ ma achọpụta na ọ dị nnọọ mfe ịga gburugburu na ngwa ngwa ịzaghachi. Ịchọta usoro ọgụgụ isi na ịhazi oge ịgụ ihe na ha dị mfe. Ọ bụ ihe ọjọọ ndị na-enye ndụmọdụ gbasara ahụike na-akụda ma ọ bụ na-atụgharị uche.
Emere Ndị Ahịa ọhụrụ
Na na-enye ohere 3 maka ndị ahịa ọhụrụ. Ị ga-edebanye aha, nye kaadị akwụmụgwọ ma zụta oge ndị ọzọ iji nweta oge ntanetị 3 gị. Achọpụtara m na oge 3 gara ngwa ngwa ma ejiri m ha niile na-agbalị ịchọta ezigbo ahụike. Keen nwere ihe kachasị njọ ndị ahịa na-eme site na ndị ọrụ ahụike niile na netwọk.
Enwere m ụfọdụ ụfọdụ Na enweghị ngalaba ọrụ ndị ahịa. Ma ọ dịkarịa ala enweghị m ike ịnweta onye dị ndụ ịzaghachi. Enwere m ọtụtụ ozi ịntanetị na-akpaghị aka na-agwa m na nkwado ahụ ga-abanye n'oge na-adịghị anya ma enweghị m ụdị ọ bụla nke kọntaktị. Enweghị enye nkwado ekwentị naanị nkwado email.